Okporo ụzọ Marking Inyeaka Akụrụngwa Nsukka | China Road Marking Inyeaka Equipment Factory & Suppliers
—— Markzọ Marking Enyemaka Inyeaka ——
LXD Boost Vehicle (ịnyịnya-on usoro)
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke agbam ume ụgbọala. Gini mere ị ga-eji jee ije mgbe inwere ike ịnọdụ ala? Jiri ụgbọ elu na-ejikọ igwe na-ejikọ okporo ụzọ, arụmọrụ ọrụ ga-akawanye oge 2-3.
LXD Nga akara Machine
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke tupu marking igwe. LXD pre-marking igwe bụ nnyemaaka igwe na ụzọ marking ewu. Ọ nwere ike itinye akara akara akara kpamkpam dị ka ihe achọrọ iji wuo iji zere akara nhụjuanya. O nwekwara ike mezuo usoro 1-3 n’adabereghị, nke na-eme ka arụmọrụ nke ọma rụọ ọrụ nke ọma.
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke priming igwe. LXD-II priming igwe bụ nnyemaaka akụrụngwa maka ụzọ marking construction.it na-onwem na a mmanụ ụgbọala engine na akpaka ikuku Compressor, o nwere uru nke elu-arụmọrụ, na-azọpụta ọrụ, mfe ọrụ, mfe mmezi, na ogologo ọrụ ndụ.
LXD-II High Pressure Road Mkpa Igwe Igwe
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke elu-mgbali n'okporo ụzọ Mkpa lownụ Machines. LXD-II ụzọ elu ịfụ igwe bụ ihe inyeaka maka akara akara akara okporo ụzọ, nke kachasị na-ekpochapụ elu ụzọ tupu ụzọ arụ ọrụ okporo ụzọ.
High Pressure Road Mkpa Sweeper
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na ụlọ ọrụ nke na-elu-nsogbu ụzọ elu sweeper. Ngwongwo inyeaka nke ihe enyemaka n'okporo ụzọ — ihe nchacha ihe nke dị n'okporo ụzọ bụ nke a na-ejikarị eme ka simenti na-agba ọbara, apịtị, ikpo okwu, na akara akara agba oyi. Ejiri ya na onye na - ahụ maka ike nke enwere ike gbanwee dịka ọnọdụ nke ụzọ dị.
LXD-II High Pressure Road Mkpụrụ Igwe Na-efegharị na Andhichapu Ngwaọrụ niile
Anyị bụ ndị China kasị ukwuu ọkachamara emeputa na factory nke elu-mgbali n'okporo ụzọ elu ịfụ Ibulite igwe. A na-eji ya maka ihicha ciment na-agba ọbara, apịtị, ala ngwa ngwa si n'okporo ụzọ. O nwekwara ike ime ka adịghị ọcha na uzuzu nke elu ụzọ. Ọ nwere uru nke imeziwanye arụmọrụ na-arụ ọrụ ma chekwaa ndị ọrụ.